Zero Nguva Yechokwadi: 8 Matanho Ekugadzirira | Martech Zone
Zero Nguva Yechokwadi: 8 Matanho ekugadzirira
Svondo, Kurume 24, 2013 Svondo, Kurume 24, 2013 Douglas Karr
Pakupera kwegore rapfuura ndakamira kune mumwe wangu kuti aite hurukuro paGoogle Zero Nguva Yechokwadi. Ipo paine toni yekuedza uye zvinhu zvinoiswa mukunyora zano, kune vazhinji vemazuva ano vatengesi zvinhu zvacho zviri zvepakutanga. Chaizvoizvo, iyo nguva yekuita sarudzo iwe paunofunga kutenga ndiyo iyo Zero Nguva Yechokwadi - kana kungoti ZMOT.
Heinoi iyo ZMOT Mharidzo Ndaita:
Heino yakadzama vhidhiyo pane iyo musoro neayo otomatiki indasitiri semuenzaniso:
Kunyange ZMOT inogona kunge isiri yechimurenga, Google inonyora matipi masere ekugadzirira ayo andinotenda kuti anofanira kuverengerwa mune chero nzira yekutengesa pamhepo:
Tanga neBlack Line yako - Ndechipi chinangwa chebhizinesi rako?
Gadzirira Kuera - Iwe unofanirwa kukwanisa kuyera mhedzisiro kuitira kuti uvandudze.
Tanga neBasiki - Vanhu vari kuwana sei, kubata uye kutenga kubva kwauri online?
Chengeta yako ZMOT Zvipikirwa - Kana vakakuwana, urikuvapa iwo ruzivo rwavaitsvaga?
Tevedza iyo 10/90 Mutemo - Chengetedza 10% yemari yako mumidziyo uye masevhisi ekuvandudza bhizinesi rako.
Enda Mberi kweMutambo - Usangotarisa kuti makwikwi ako aripi, tarisa pane kwaachave kana kutora maonero akawandisa ekuti vari kukuwana sei.
Chengeta Ziso pane Micro Shanduko - Hazvisi zvekutenga chete, tarisa zviitiko zvemagariro, kunyorera, kurodha pasi, kunyoresa, nezvimwewo zvinotungamira kumatarisiro ekuzove vatengi.
Tanga Kukundikana Nokukurumidza - Dzokera kumashure kubva pazano rakakura uye tsvaga nzira dzekumhanyisa padanho diki - ramba uchikurumidza.
Dhawunorodha izere ruzivo mu ZMOT Kugadzirira Pepa Rokushanda uye tarisa iyo Zero Nguva Yechokwadi saiti yeruzivo rwekuwedzera.
Tags: auto kushambadziramotokarimota indasitiri yekushambadziraGoogle +zero nguvazero nguva yezvokwadiZMOT
Gadzira Yako Google Analytics Infographic pane Kutarisa
Mobilenomics: Kana Iwe Usiri Wekufambisa, Hausi Kushambadzira